June 9, 2021 - Online Hartha
နာမညျကွီးနပွေီး စားခငျြစဖှယျ အစားအစာတဈခုဖွဈတဲ့ ထိုငျးမုနျ့ဟငျးခါးခကျြနညျး
June 9, 2021 by Online Hartha
နာမည်ကြီး စားချင်စဖွယ်အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ထိုင်းမုန့်ဟင်းခါးချက်နည်း ငါး ၃၀သားစပါးလင် ၂ချောင်းအုန်းနို့ ၁ဗူးခွဲကြက်သွန်နီ ၁၅ကျပ်သားကြက်သွန်ဖြူ ၃လုံးဆိတ်ဖူးဥ ၅ကျပ်သားခန့် ခရမ်းချဉ်သီး ၃လုံးကြက်ခြေထောက် သို့ ဝက်နံရိုး နဲ့ ငါးတို့ကို ဆနွင်းမှုန့် စိမ်းစားငါးပိ စပါးလင် နဲ့ ဆားအနည်ငယ် ထည့်၍ ၁၅မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပါ။ ရရင် ငါးကိုအရိုးနွင်ပြီး ငါးအသားများကို ညှက် အောင် ထောင်းထားပါ။ ကြက်သွန်နီ ကြက်သွန်ဖြူ ဆိတ်ဖူးဥတို့ကို ငရုပ်သီးခြောက်အနီတောင့်နှင့် ညှက်အောင် ထောင်းပြီး ဆီသပ်ပါ။ပီးမှ အုန်းနို့ ထည့်ချက်ပါ။ မီးဖြည်းဖြည့်ဖြင့် ၅ မိနစ်ခန့် ပေးဆူ ပြီးမှ ငါးပြုတ် ရေ ကြက်ခြေထောက် သို့ ဝက်နံရိုး နဲ့ ထောင်းထားသေားငါးအသားများ လှီးထားတဲ့ခရမ်းချဉ်သီး readymade ငါးဖယ်လုံး ပဲသွေးတုံး သို့ … Read more
အပြိုကွီးမမ တဈယောကျနဲ့တဈညအိပျမိလိုကျတဲ့ ဟျောတယျ မနျနဂြောရဲ့အဖွဈ
June 12, 2021 June 9, 2021 by Online Hartha
အပျိုကြီးမမ တစ်ယောက်ဟာ သူ့မွေးနေ့အတွက် အကောင်းစား ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ တစ်ယောက်တည်း ဇိမ်ကျကျ သွားတည်းပြီး ကုန်ဆုံးစေလိုက်ပါတယ် ။ နောက်တစ်နေ့မှာ ဟိုတယ်ကနေ ပြန်ဖို့ ငွေရှင်းတော့ အခန်းခ က ဒေါ်လာ ၂၅၀ တောင် ဖြစ်နေတယ် ။ အဲ့ဒါနဲ့ ဈေးအရမ်း များနေတာမို့ အပျိုကြီးက ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းနဲ့ အငြင်းအခုံဖြစ် စကားများနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ဟိုတယ်မန်နေဂျာ ရောက်လာတယ်။ မန်နေဂျာ က “ကျွန်တော်တို့ ဟိုတယ်မှာ ဧည့်သည်အတွက် ပေးထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ အများကြီးပဲေ အမကြီးရယ်။ Spa ၊ ရေကူးကန်၊ အားကစားခန်းမတွေကို အခမဲ့ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်… အဲဒီအတွက် ဝန်ဆောင်ခတွေကို အခန်းခထဲမှာ ထည့်ပေါင်းထားပြီးသားပါခင်ဗျာ” ထိုအခါ အပျိုကြီးက “ဒါပေမဲ့ … Read more
ခင်ပွန်းသေပြီး သုံးနှစ်အကြာမှာ ခင်ပွန်းရဲ့ရင်သွေး သမီးလေးကို မွေးဖွားနိုင်ခဲ့သူ
သိပ္ပံပညာနဲ့ အလွန်အလှမ်းဝေးသူများအဖို့ ခင်ပွန်းသေပြီးလို့ နောက်ထပ် တစ်နှစ်လောက်အကြာမှ သူရဲ့ ကလေးကို မွေးဖွားတယ်ဆိုတာ အတော်လေးကို လက်ခံရ ခက်ခဲတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခုဟာက ခင်ပွန်းသေပြီးမှ သူရဲ့ သွေးရင်းသားရင်းကို သုံးနှစ်အကြာမှာ မွေးတယ်ဆိုတာက သာလို့တောင် မဖြစ်နိုင်တဲ့သတင်း အူလှိုက်သည်းလှိုက် ရယ်ရမယ့် သတင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပပညာ၊ ခေတ်မီတဲ့ ဆေးပညာ၊ အလွန်ကိုပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာခေတ်ကြီးမှာ အားလုံးကို ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ မဆိုလိုပေမယ့်၊ ကျနော်တို့စိတ်က မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်မှတ်ထားတဲ့ အရာတွေကိုတော့ ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း အသက် 32 အရွယ်မှာ အကြွေစောခဲ့ရတဲ့၊ New York Police Department’s (NYPD) ရဲဌာနမှာရဲအရာရှိအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ Liu အမည်ရ အမျိုးသားဟာ … Read more
Categories သတင်းစုံ Leaveacomment
မိန်းကလေးတွေ သတိပေးချင်လို့ ကိုယ်ချစ်လည်းမရှာနဲ့ သူချစ်လည်းမရှာပါနဲ့ လူစိတ်ရှိတဲ့လူကိုပဲရှာကြပါ (ဖြစ်ရပ်မှန်) ကျွန်မသူငယ်ချင်းက နှလုံးရောဂါ ရှိတယ် ကလေးယူမရဘူးလို့ ဆရာဝန်မှာထားတယ် သူ့ယောက်ကျားက ကလေးလိုချင်တယ် ကလေးယူပေးလို့ ခနခနပြောတယ်။ (4.12.2019) သူ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီး ကျွန်မနဲ့ပြောပြလာတယ် ကျွန်မကမယုံဘူးမယုံဘူး နင်ငါရှေ့မာဆီးစစ်ပြဆိုပြီး သူကစစ်ပြပေးတယ်။ ကျွန်မကပျော်လေပျော်တယ် စိတ်လေပူတယ် သူက ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး ဆရာဝန်လေကလေးယူရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့မှာထားတယ် ကျွန်မစိတ်ပူနေမိတယ်။ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့အကြောင်းသူယောကျာ်းနဲ့ သူပြောပြတယ် သူယောကျာ်းပျော်မယ်လို့ထင်ထားတယ် ဘယ်ဟုတ်မလဲ ဖျက်ချဖို့ပြောလာတယ်။ နင်ပဲလိုချင်တယ် ငါရတော့မှ ဖျက်ချဖို့ဆိုတာ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရပြီးတယ်နောက်ပိုင်း သူယောကျာ်း သူ့ကိုနည်းနည်းလေးမှ ဂရုမစိုက်တော့ဘူး အိမ်မှာမနေဘူး သူကနှလုံးရောဂါရှိတယ်လေ စိတ်ဓာတ်ကျတယ် စားမဝင်အိပ်မပျော်တော့ဘူး။ကျွန်မက အားပေးစကားပြောတယ် သူ့နဲ့အဖော်နေပေးတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ သူယောကျာ်းအမေအိမ်ပြန်သွားတယ် သူကဆံပင်ဖျောင့်ချင်တယ် လမ်းမလျှောက်တလျှောက်နိုင်တဲ့ ကျွန်မ အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။ အဲဒီနေ့က ကျွန်မနားအရမ်းနာနေတယ် နောက်နေ့မှသွားလို့မရဘူးလား … Read more
မဟာတနျး ကြောငျးသူလေး အသုဘမီးသင်ျဂွိုလျခါနီး မိခငျမှ နောကျဆုံးအနနေဲ့ နမျးလိုကျတဲ့အခြိနျ
တိုးတက် ခေတ်မီ ချင်တဲ့နေရာမှာလိုသလိုဆွဲယူ ခေတ်မီ နေကြပြီး ရှေးဟောင်း အယူသည်းမှုတွေကိုတော့ မပစ်ပယ်နိုင်ကြသေးဘူး။ သေရွာပြန် လူတစ်ယောက်ကို လူနေရပ်ကွက်ထဲ ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင် အသုဘလိုက်ပို့တဲ့ လူတွေပါ ရပ်ကွက်ထဲ ပြန်မဝင်ခိုင်းပါနဲ့။သူတို့တွေလည်း သင်္ချိုင်းကုန်းကို ရောက်ခဲ့ကြတာပဲလေ။ လူကို လူလို့ပဲမြ င်ပြီး လူ အဖြစ် ပြန်အသိမှတ်ပြုပေးရမှာပေါ့။ ကံကောင်း လို့ မသေပဲ အသက်ရှင်လျက် ပြန်ရရှိလိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဘာလို့ မကြိုဆိုနိုင်ကြတာလဲ။ဘာလို့များ လူ့ အသိုင်းအဝိုင်း ကို ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုချင်ရတာလဲ။ ကဲ ~ မလိုတဲ့ အယူအဆတွေ ပယ်ကြရအောင်ဗျာ။ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ၁၅ မိနစ်ခန့် မန္တလေး ကြာနီကန် သုဿန်မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ကုန်ထုတ် … Read more
✡️နယုန်လအတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ🔯 ☸️နယုန်လဆန်း(၁)ရက်နေ့ (10.6.2021) မှ နယုန်လကွယ်နေ့(8.7.2021)အထိတစ်လတာလုံး☸️ လစ်ပို ပုလင်းအလွတ်ထဲတွင် ရေသန့်ဖြည့်ထားရမည်။အုန်းညွန့်(၆)ညွန့်ကို ထိုလစ်ပိုပုလင်းထဲတွင်ထည့်ပါ။ ကြွေပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်ပေါ်တွင် အုန်းညွန့်စိုက်ထည့် ထားပြီးသား လစ်ပိုပုလင်းကို တင်ပြီး ထိုပုလင်း၏ဘေးပတ်ပတ်လည် တစ်ဝိုက်တွင် #ပေါက်ပေါက်ပွင့် အနည်းငယ် ဝိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ယခုအစီအရင်ကို မိမိအိမ်ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှိ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရိုသေစွာဖြင့် လှူဒါန်း ပေးထားရပါမယ်ခင်ဗျ…..။ ☕️ယခုလတစ်လတာတွင် #လိမ္မော်ရည် တစ်ခွက်စီ နေ့စဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ကပ်လှူပေးနေခြင်းဖြင့် မိမိအတွက်ထူးခြားမှူဖြစ်စဉ်များကောင်းကျိုးများစွာကိုလည်း ရရှိခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကံချေကန်တော့ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ရန် မမေ့ပါနှင့်။*နေ့စဉ်အောက်ဖော်ပြပါဂုဏ်တော်များကိုရွတ်ဖတ်ပါ။ *🙏ဣတိပိသောဘဂဝါ လောကဝိဒူ=၁၉ခေါက် 🙏ဣတိပိသောဘဂဝါ ဗုဒ္ဓေါ=၆ခေါက် 🙏ဣတိပိသောဘဂဝါ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နော=၁၇ခေါက် #နယုန်လအတွက်နေ့စဉ်လာဘ်ပွင့်အရပ်မျက်နှာများ ◾️တနင်္ဂနွေနေ့=မြောက်အရပ် ◾️တနင်္လာနေ့=တောင်အရပ် ◾️အင်္ဂါနေ့=အရှေ့အရပ် ◾️ဗုဒ္ဓဟူးနေ့=အနောက်အရပ် ◾️ကြာသပတေးနေ့=အရှေ့အရပ် ◾သာကြာနေ့=မြောက်အရပ် ◾️စနေနေ့=တောင်အရပ် ✳️အထက်ပါအတိုင်းနေ့အလိုက်နေ့စဉ်အရပ်မျက်နှာမူ#ဧဟိလာဘံ ဟူ၍(၂၇)ခေါက်တိတိရွတ်ပေးရပါမည်။ 🙏ဆုတောင်းစာ🙏 “အကျွန်ုပ်နှင့်တကွ အကျွန်ုပ်၏တစ်မိသားစုလုံးနယုန်လ တစ်လတာအတွင်း ကိုယ်ရောကျန်းမာ၊စိတ်ရောချမ်းသာစွာဖြင့် … Read more
မိန်းမ (ဇနီး) နဲ့ ချစ်သူ(အငယ်စမော) ကွာခြားချက်များ
မိန်းမ (ဇနီး) နဲ့ ချစ်သူ(အငယ်စမော) ကွာခြားချက် မိန်းမက TV နဲ့တူတယ်။ချစ်သူက စမတ်ဖုန်းနဲ့ တူတယ်။ ခများ…အိမ်မှာနေရင် TV ကြည့်ပေမယ့် အပြင်ထွက်ရင်တော့ ဖုန်းကိုပဲ ယူသွားတယ် မဟုတ်လား။ ဒါတောင်…TV ကို တခါတရံမှ ကြည့်ပြီး၊ ဖုန်းကိုတော့ အချိန်ပြည့် ပွတ်နေတာပဲလေ။ သို့သော်…TV က အစီအစဉ်တွေကို အလကားကြည့်လို့ ရပေမယ့်၊ဖုန်းကတော့ ငွေမဖြည့်တာနဲ့ လိုင်းဖြတ်သွားပြီသာမှတ်။ TV က ကြီးတယ်၊ လေးတယ်၊ အိုဟောင်းတဲ့အထိ အကြာကြီး သုံးရတယ်။ ဖုန်းကတော့ သေးတယ် လှပတယ် အလွယ်တကူ သယ်သွားလို့ ရတယ်၊ ၂ နှစ်ကို တစ်ကြိမ်လောက် အသစ်လဲကိုင်လို့ ရတယ်။ TV နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကုန်ကျစရိတ် သိပ်မများပေမယ့် ဖုန်းကတော့ … Read more
အမျိုးသားများအတွက် လျှို့ဝှက်ဆေးစွမ်းကြီး” မင်းတုန်းမင်းကြီးဘာကြောင့်အစွမ်းထက် ရပါသလဲ”
အမျိုးသားများအတွက် ဆေးစွမ်းကြီး” မင်းတုန်းမင်းကြီးဘာကြောင့်အစွမ်းထက် ရပါသလဲ” “ပရန္နဝါ, ပါးပါးလွှာ သကာများနှင့်ဖက်၊ ဒန့်သလွန်ပွင့်, အုန်းဆံရင့် ချိန်သင့်ညီမျှစွက်၊ မင်းတုန်းမင်းခေါင်, သူသုံးဆောင် ဘုန်းခေါင်နေသို့လက် ” ( ပရန္နဝါပင် )သိပ္ပံအမည် Boerhavia diffusa Linn အာယုဗ္ဗေဒဆေးပညာတွင် ရသာယနဆေးဘက်ပစ္စည်းအဖြစ် အဓိကအသုံးပြုသော အပင်ဖြစ်သည်။ Punarnavine, Triacontanol,Hentriacontane, ursolic acid5, 7-dihydroxy-6, 8di methyl fkavone, retenoid boeravinones A1 B1 C2 D-F, boerhavine, boerhavic acid, tannins, phlobaphenes ဓာတ်ပေါင်းများပါဝင်ပါသည်…။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လေ့လာမှုအရ နွေရာသီမေလတွင် တူးဖော်သော ၃စင်တီမီတာ အချင်းရှိသည့် ဆေးမြစ်သည် အသဲက်ို ကောင်းစွာကာကွယ်ပေးနိုင်သော အာနိသင်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။အိနိယနိုင်ငံတွင် နှလုံးအားတိုးဆေး … Read more
အမြိုးသမီးမြား လြှို့ဝှကျကငျမရာရနျမှ ဘယျလို ကာကှယျမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးမြား…
အဝတ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တပ်ဆင်ထား/မထား ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ အဝတ်အထည်စတိုးဆိုင်ကြီးတွေနဲ့ ပလာဇာတွေရဲ့ အဝတ်အစားလဲခန်း (အဝတ်အထည်အသစ်တွေကို စမ်းသပ်ဝတ်ဆင်ကြည့်တဲ့အခန်း) တွေမှာ မသမာသူတွေက hidden camera (လျှို့ဝှက် ကင်မရာ) တွေ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကင်မရာတွေဟာ သေးငယ်လွန်းတာကြောင့် ဘယ်နားမှာတပ်ဆင်ထားလဲဆိုတာ တော်ရုံတန်ရုံ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းကတော့ မိမိမှာပါလာတဲ့ mobile phone နဲ့စမ်းသပ်တဲ့နည်းပါပဲ။ 1. အဝတ်လဲခန်းထဲကိုမဝင်မီ မိမိဖုန်းကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု လုပ်လို့ရမရ စစ်ဆေးထားပါ။ 2. အဝတ်လဲခန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါ မိမိရဲ့ mobile phone ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။ 3. ဖုန်းခေါ်လို့မရဘူးဆိုရင် အဲဒီအဝတ်လဲခန်းထဲမှာ hidden camera ရှိနေဖို့ များသွားပါပြီ။ ဖုန်းခေါ်မရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ … Read more
“သူ့ကိုယ်သူ အရမ်းနုပျိုတယ်လို့ ထင်နေတဲ့ မမကြီးနဲ့ ကိုယ်တွယ်စမ်းသပ်ပြီး အသက်ခန့်မှန်းနည်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဘဘကြီးတို့ တွေ့ကြလေသောအခါ”
ဘောစိမမတယောက်…သူ့မရဲ့လေးဆယ့်ငါးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ အလှပြင်ဆိုင်ကိုသွားပြီး ….မျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေကို ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ် 😎ပိုက်ဆံတော်တော်ကုန်သွားပေမဲ့မှန်ထဲမှာမြင်နေရတဲ့…သူမရဲ့နုပျိုနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုတွေ့တော့ကျေနပ်ပြီးပြုံးနေတယ် 😎ရုပ်ကနုပျိုသွားတော့…သူမရဲ့စိတ်ကလည်းလန်းဆန်းတက်ကြွလာပြီး…အိမ်ပြန်လမ်တလျှောက်လုံးမှာ… သူမရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာတွေက တကယ့်ကို…ဖျက်လတ်သွက်လတ်နေတာပါ 😎မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု့မြင့်မားလာခြင်းနဲ့အတူ…တပါးသူတွေရော သူမအပေါ်…ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာ…သိချင်လာတယ် 😎အာ့နဲ့..ဖိနပ်ဆိုင်ထဲဝင်သွားပြီး…ဖိနပ်တရံဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာ…အရောင်းဝန်ထမ်းကောင်လေးကိုမေးလိုက်တယ် 👩” ဟိတ် ! မမတခုမေးရင်မောင်လေးစိတ်မဆိုးဘူးထင်တယ်” ” မမ အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ သိလား ” 🧓” ၃၂ လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ် မမ ” 👩” အို ! မဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးရယ်” ” ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါနော် မွမွ ” 😎ဆိုင်ထဲကထွက်လာချိန်မှာတော့သူမဟာ ပီတိနဲ့အတူတိမ်တွေကိုစီးမျောနေရသလိုပါ 😎နောက်ထပ် KFC ဆိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ် ကောင်တာကကောင်မလေးကို သူ့အသက်ကို…ခန့်မှန်းခိုင်းပြန်တယ် 🙋” ၃၀ တော့ရှိမယ်ထင်တယ် မမ ” 👩” မဟုတ်ပါဘူး ညီမလေးရယ် ” ” မမ ဒီနေ့ပဲ အသက် ၄၅ … Read more